I-Lorcaserin (Belviq) powder (616202-92-7) hplc≥98% | Ukulahleka Kakhulu Kwe-AASraw
/ Imikhiqizo / I-Fat Loss powder / I-Lorcaserin (Belviq) powder
Isilinganiselwa: SKU: 616202-92-7. Isigaba: I-Fat Loss powder
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugramu ukuya ku-Lorcaserin (Belviq) powder (616202-92-7), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
Ukhiqiza i-drug ephumelelayo nokuphephile kwesisindo kuyisimo esibucayi. Imizamo esikhathini esidlule ifike nemiphumela emibi eminingi enjengomonakalo wenhliziyo. Ngenhlanhla, isifundo esisha sithi i-lorcaserin isisindo sokuphuza isisindo singakusiza ukuba uchithe isisindo esiningi ngaphandle kokudela impilo yenhliziyo yakho. I-Lorcaserin iyilitha elidambisayo lokucindezela ukudla, elivunyiwe yi-FDA ku-2012. Kodwa yini i-lorcaserin? Ngezansi incazelo ejulile yomuthi, isakhiwo sayo samakhemikhali nezakhiwo, ukusetshenziswa, isilinganiso, izinyathelo zokuphepha, nokunye okuningi.
Igama lomkhiqizo: Lorcaserin / BELVIQ (lorcaserin hydrochloride)
Ividiyo ye-powder yeLorcaserin (Belviq)
ILorcaserin (Belviq) powder Izinhlamvu eziyisisekelo:
Igama: Lorcaserin (Belviq) powder
Ifomula Yamamolekhula: C11H14ClN
Isisindo Yamamolekhula: 195.692
Umbala: I-white to off-white powder
Ngezansi isakhiwo samakhemikhali se-lorcaserin ekukhonjisweni kwe-3-D.
Izakhiwo Zamakhemikhali zeLorcaserin (belviq) (CAS 616202-92-7)
Ngezansi izakhiwo zamakhemikhali ezifingqiwe zeLorcaserin (belviq); zinikezwe etafuleni elingezansi ukuze uthi shazi.
Igama lomhlaba I-Property Value
Ukubala kwe-Unit Integrated-Bonded 1
Ukubala okungenakulinganiswa kwesibalo 0
Ukubalwa kwe-Bond Stereocenter Count 0
Ukubala okungenakulinganiswa kwe-Atom 0
Count Count Stereocenter Count 1
Count Atom Count 13
Ukukhokha Okuhlelekile 0
I-Compound I-Canonicalized Yiqiniso
IMisa yangempela I-195.081 g / mol
IMisa ye-Monoisotopic I-195.081 g / mol
Indawo ephezulu yePolological Polar I-12 A ^ 2
I-Count Bond Count 0
I-Hydrogen Bond Acceptor Count 1
I-Hydrogen Bond Donor Count 1
isisindo Yamamolekhula I-195.69 g / mol
i-pKa = i-9.98 (est)
Incazelo elula ye-Lorcaserin HCL powder
ILorcaserin (Belviq) yiphilisi elinciphisa isifiso sokudla elenziwe yi-Arena Pharmaceuticals. Kungokwesigaba semithi ebizwa nge-serotonin receptor agonists. Yenzelwe ukukusiza uzizwe usuthi ngemuva kokudla ukudla okuncane. Icindezela isifiso sokudla ngokwenza kusebenze i-5-HT2C ama-receptors, okuyizinhlobo ze-receptors ze-serotonin esifundeni sobuchopho (hypothalamus) esilawula ukudla. Uma bekhombisa ukuthi umzimba wakho uzizwa ugcwele, uthola ukudla okuncane, ngaleyo ndlela ugcine ulahlekelwa isisindo ngokuhamba kwesikhathi.
I-Belviq, ogama lakhe elibizwa ngamakhemikhali (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3- benzazepine hydrochloride hemihydrate, lenzelwe ukuthathwa ngomlomo. Isisindo sayo samangqamuzana i-241.16 g / mol, futhi isakhiwo sayo esiphezulu nguC11H15Cl2N • 0.5H2O. Inkomfa yayo yokwakha ingezansi:
Ukuncibilika kweLorcaserin hydrochloride hemihydrate emanzini kuphakeme kune-400 mg / mL. Ithebhulethi yaseBelviq inama-milligram ayi-10.4 we-crystalline lorcaserin hydrochloride hemihydrate (impuphu emhlophe kuya emhlophe), elingana no-10.0 milligrams anhydrous lorcaserin hydrochloride. Iqukethe nezinye izithako, kufaka phakathi i-magnesium stearate NF, talc USP, FD & C Blue # 2 aluminium lake, titanium dioxide USP, polyethylene glycol NF, polyvinyl alcohol USP, colloidal silicon dioxide NF, croscarmellose sodium NF, silicified microcrystalline cellulose and hydroxypropyl cellulose NF.
Ngokweziqondiso zokuqondisa izidakamizwa ze-Food and Drug Administration (2007), i-Lorcaserin iyakwazi ukusiza abantu abadala ukuba bafeze ukulahlekelwa kwesisindo esibhedlela. Lesi sidakamizwa sokulahlekelwa kwesisindo kuthiwa sisebenza kahle uma sihlangene nomsebenzi wokwenyuka ngokomzimba kanye nokudla okuphansi kwekhalori. Kungasiza kakhulu ngokulawulwa kwesisindo esingapheli, ikakhulukazi kubantu abakhuluphele ngokweqile (okungenani i-27 kg / m2), noma okhuluphele (i-BMI okungenani i-30 kg / m2). Le mithi ingasiza nalabo abanezinkinga ezihlobene nesisindo noma ngaphezulu, ezifana nohlobo lwe-2 sikashukela, i-dyslipidemia, noma umfutho wegazi ophezulu.
I-Lorcaserin iyiphilisi yokunciphisa ukudla enomdla eyenza ngokukhetha njenge-5-HT2C i-receptor agonist ku-hypothalamus enezinyathelo zokukhetha kwezikhathi eziyishumi nesishiyagalolunye ezithandanayo ze-5-HT2C receptors kune-5-HT2A kanye nokwehlisa izikhathi ezingu-100 eziphezulu zokusebenza ze-5-HT2C receptors kune-5-HT2B.
Ama-receptors we-5-HT2C atholakala cishe kuphela ebuchosheni bomuntu futhi angatholakala kwi-thalamus, hypothalamus, cortex, hippocampus, choroid plexus, cerebellum, ne-amygdala. Ukukhuthazwa kwama-receptors we-5-HT2C ku-hypothalamus kusebenze ukukhiqizwa kwe-POMC (proopiomelanocortin) ngakho-ke kukhuthaza ukunciphisa isisindo ngokusutha. Le mpikiswano isekelwa izivivinyo zomtholampilo ezifakazelwe nezinye izifundo zocwaningo. Ngenkathi kucatshangwa ukuthi ama-receptors we-5-HT2C asiza ekulawuleni isifiso sokudla, uketshezi lwe-endocrine, nomoya, indlela eqondile yokusebenza kumthethonqubo wokudla awaziwa.
Umamukeli EC50 [nM] Ki[nM]
I-5-HT2C 39 13
I-5-HT2B 2380 147
I-5-HT2A 553 92
Ukusetshenziswa kwe-Lorcaserin HCL powder
Uma sibheka ukubuyekezwa kwangempela kwe-Lorcaserin ngaphandle, khona-ke lokhu cishe kuyisisindo esihle kakhulu sepilisi yokulahlekelwa emakethe namuhla. Abantu abathile ngokweqile ngokweqile, okungukuthi, labo abanezimo zezokwelapha ezihlobene nesisindo noma labo abakhuluphele bangakwazi kakhulu ukuzuza kulo mkhiqizo.
Uma isetshenziselwa ngokuhlanganyela nohlelo lokuvotela olugunyazwa udokotela, uhlelo lokudla lokudla ngekhalori elincane, nokuguqulwa kokuphila, i-Lorcaserin ingasiza umuntu enze okuningi kunokuba nje alahlekelwe isisindo - kungasiza ukwehlisa izingozi eziningi zempilo ezihambisana nokukhuluphala, okufaka phakathi umfutho wegazi ophezulu, isifo sikashukela, isifo senhliziyo, nokufa ekuqaleni.
NgokweSikhungo Sokulawulwa Kwezifo, ukulahlekelwa yi-5 kuphela kumaphesenti angu-10 wesisindo somzimba wonke kungabonisa izinzuzo zezempilo ezifana nokuthuthukiswa kwe-ushukela wegazi, i-cholesterol yegazi, nokucindezelwa kwegazi.
Umthamo we-Lorcaserin HCL powder
Abantu abadala kufanele bathathe amaphilisi amabili ngosuku. Ngakho-ke uzodinga ukuthatha amaphilisi e-60 ngenyanga. Ngokusho kwe-FDA, umuntu kufanele asebenzise lesi sidakamizwa phakathi nakho konke ukuphila kwakhe ukuze agcine isisindo esinempilo.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi imiphumela emihle kufanele ibonwe ngemuva kwamaviki angu-12. Uma ungenakulahlekelwa okungenani amaphesenti angu-5 wesisindo somzimba wakho osisisekelo ngaleso sikhathi, uyalwa ukuba uyeke ukusebenzisa iphilisi. Ngisho nokusetshenziselwa okuqhubekayo, akuncane ukuthi uzothola futhi ugcine ukulahlekelwa kwesisindo somzimba.
I-Lorcaserin HCL Yokuqapha
Kuhle ukukhumbula ukuthi uchwepheshe wakho wezokunakekelwa kwempilo ukunikeze lo muthi ngoba bahlulele ukuthi inzuzo oyitholayo iphezulu kunezingozi zemiphumela emibi. Iningi labantu abathatha lo muthi alibonisi imiphumela emibi kakhulu.
Ngaphambi kokuthi uthathe i-lorcaserin, yazisa usokhemisi noma udokotela wakho ukuthi ngabe awunalo igciwane kumuthi; noma ngabe unanoma yini enye yokungezwani nomzimba. ILorcaserin iqukethe izithako ezingasebenzi ezingadala ukungezwani komzimba noma ezinye izingqinamba. Cela usokhemisi wakho ukuthi akunikeze imininingwane eyengeziwe.
Ngaphambi kokuthatha lesi sidakamizwa, yazisa usokhemisi noma udokotela wakho ngomlando wakho wezokwelapha, ikakhulukazi ngezinkinga zezinso, isifo sikashukela, inkinga yesibindi, izifo zenhliziyo (kufaka phakathi i-heart block, isifo senhliziyo, ukushaya kwenhliziyo, ukwehluleka kwenhliziyo) izinkinga ezingakhuphula ubungozi ukuvinjelwa okubuhlungu / okude emadodeni (kufaka phakathi ipipi elikhubazekile, isifo sikaPeyronie, i-myeloma eminingi, i-sickle cell anemia, i-leukemia).
Leli philisi lokunciphisa ukudla lingakwenza unciphise ukucabanga kwakho noma isiyezi. Insangu noma utshwala kungenza le miphumela ibe mibi kakhulu. Musa ukusebenzisa imishini, ukushayela, noma ukwenza noma yini edinga ukuqapha uze ukwazi ukuyenza ngokucophelela. Nciphisa iziphuzo ezidakayo bese ukhuluma nodokotela wakho uma usebenzisa insangu.
Uma uzohlinzwa, kuwukuhlakanipha ukuthi utshele udokotela wamazinyo noma udokotela wakho ngayo yonke imikhiqizo oyithathayo (kufaka phakathi izidakamizwa ezingabhalisiwe, imikhiqizo yamakhambi, nemithi kadokotela).
Uma uphila nesifo sikashukela, le pilisi yokwehlisa isisindo ingathinta ushukela wegazi lakho. Qiniseka ukuthi uhlola izinga likashukela egazini ngezikhathi ezijwayelekile njengoba welulelwe bese wabelana ngemiphumela yakho nodokotela. Yazisa udokotela wakho uma unezimpawu zeshukela ezisezingeni eliphansi. Uchwepheshe wakho wokunakekelwa kwezempilo angadinga ukulungisa uhlelo lwakho lokuzivocavoca, imishanguzo yokudla noma yesifo sikashukela.
Lesi sidakamizwa akufanele sithathwe ngesikhathi sokukhulelwa ngoba singalimaza ingane engakazalwa. Buza udokotela wakho mayelana nokusetshenziswa kwezinhlobo ezinokwethenjelwa zokulawulwa kokubeletha. Uma ukhulelwe noma ukhulelwe, tshela umsebenzi wezokunakekelwa kwempilo ngokushesha.
Kuze kube manje, akwaziwa noma ngabe lesi sidakamizwa sidlulela ebisini lwebele. Ukuvimbela ukuba sengozini kwengane, ukuncelisa ibele uma usebenzisa lo muthi akunconywa. Qinisekisa ukuthi uthintana nodokotela wakho ngaphambi kokuncelisa.
Funda Ipheshana Lolwazi Lomsebenzisi ngokucophelela uma litholakala kudokotela wakho ngaphambi kokuqala ukusebenzisa i-lorcaserin nanoma yisiphi isikhathi lapho ugcwaliswa khona. Uma kwenzeka unombuzo, buza usokhemisi noma udokotela wakho.
Thatha leli philisi lokunciphisa ukudla ngomlomo noma ngaphandle kokudla njengoba kuqondiswe ngusokhemisi wakho, imvamisa izikhathi ezimbili ngosuku. Sebenzisa lesi sidakamizwa njalo ukuze uthole okuningi kuso. Ukukusiza ukukhumbula, phuza iphilisi ngezikhathi ezifanayo nsuku zonke.
I-Lorcaserin yisidakamizwa esenza umkhuba. Musa ukwandisa umthamo noma uthathe le pilisi kaningi kunalokho okushiwo. Isimo onakho singahle sithuthukise noma sisiphi isikhathi esisheshayo, futhi ingozi yemiphumela emibi ingakhuphuka.
Ukusebenzisana kwezidakamizwa ezinamandla kungenziwa uma izidakamizwa ezithile zisetshenziselwa kanye ne-lorcaserin iphilisi. Tshela udokotela wakho ngazo zonke izidakamizwa ozisebenzisayo njengamanje, nanoma yikuphi omunye umuthi oqalayo noma oyeka ukuyisebenzisa.
I-pilcaserin isisindo sokulahlekelwa isisindo asivunyelwe ukusetshenziswa ngabantu abancane kuneminyaka eyi-18 ubudala.
Kufanele ngithathe kanjani i-Lorcaserin HCL powder?
Ungahlaziyi, uphule, noma uqede ithebhulethi ekhulisiwe. Vele uyigwinya.
I-Lorcaserin ukucindezela ukudla okunengqondo nje yingxenye yohlelo oluphelele lwezokwelapha olufanele futhi lubandakanye ukuzivocavoca, ukulawula isisindo, ukudla, futhi njalo uvivinye ushukela wegazi lakho. Landela imithi yakho, ukudla okunomsoco, kanye nemigomo yokuzivocavoca kakhulu.
Gcina imithi ekamelweni lokushisa ngaphandle kokushisa nomswakama.
Gcina irekhodi lemali yezidakamizwa ezisetshenziswa kuzo zonke izikhumba. I-pilcaserin isisindo sokuphuza isisetshenziswa sokuhlukunyezwa, futhi kufanele njalo uqaphele uma othile esebenzisa imithi yakho ngaphandle kwemithi noma ngokungafanele.
Ungalokothi wabelane ngemithi ye-lorcaserin nanoma ubani omunye. Gcina isidakamizwa endaweni lapho kungekho muntu ongayithola khona.
Kwenzekani uma ulahlekelwa umthamo we-Lorcaserin?
Mane nje uthathe umthamo ongabanjwanga ngokushesha ukhumbule. Kumele uweqe umthamo ongekho uma isikhathi se-dose ehleliwe esilandelayo siphelile. Ungathathi i-dose eyengeziwe yokwenza umthamo ongabanjwanga.
Kwenzekani uma udlula u-Lorcaserin?
Bheka usizo oluphuthumayo lwezokwelapha noma xhumana nolayini wosizo lwe-Poison ku-1-800-222-1222.
Yini okufanele ngiyigweme ukuthatha ngenkathi i-lorcaserin?
Ungathathi noma yikuphi okunye okungekho emthethweni noma imikhiqizo yokunciphisa isisindo ngaphandle kokuthola iseluleko sikadokotela wakho. Futhi, ungathathi imithi ebandayo noma ekhwehlela lapho uthatha i-lorcaserin pilill.
Yimiphi eminye imithi engathinta i-lorcaserin?
Izidakamizwa ezilandelayo zingathinta ukuthi i-lorcaserin isebenza kanjani:
I- “triptan” okungumuthi wekhanda we-migraine – njengoMaxalt, uZomig almotriptan, rizatriptan, sumatriptan, frovatriptan, zolmitriptan, Imitrex, neminye.
noma yiluphi uhlobo lwe-antidepressant
ukungasebenzi kahle kwe-erectile- i-Levitra, i-Viagra avanafil, i-Cialis, i-sildenafil, i-tadalafil, nabanye;
i-tryptophan (eyaziwa nangokuthi yi-L-tryptophan);
ukukhwehlela noma izidakamizwa ezibandayo eziqukethe i-dextromethorphan; noma
imithi yokwelapha ukugula ngengqondo, imizwa noma ukukhathazeka.
Uhlu olungenhla aluphelele. Eminye imithi ingathinta i-lorcaserin, futhi akuwona wonke ukusebenzisana okungenzeka kubekwe kulolu mhlahlandlela wemithi.
Imibiko ye-BBC Ngokuphepha Nokusebenza Kahle kweLorcaserin HCL (CAS 616202-92-7)
Kuye kwaba nemibiko eminingi ye-BBC eLorcaserin ngokuphathelene nokusebenza kahle kodwa nokuphepha kwemithi. Ngokusho kwe-BBC, ukutadisha kwamuva, okushicilelwe eNew England Journal of Medicine, kubonisa ukuthi abantu abasebenzisa i-lorcaserin yokudla iphilisi ecindezelayo balahlekelwa cishe nge-8.8lb (4kg) ngesikhathi sokurekhoda okungenani iminyaka emithathu nengxenye. Imiphumela yalolu cwaningo yafakazela ukuthi i-lorcaserin akungabazeki ukuthi enye yezinsizakalo ezingcono kakhulu zokulahlekelwa isisindo.
Lo mbiko ubuye uthi umuthi njengoba usebenza ngokunciphisa ukudla, ungafaki abasebenzisi engozini enkulu yezimo zenhliziyo.Isifundo esishicilelwe silandele ukukhishwa kwe-12,000 obese noma iziguli ezidlulele ngokweqile e-USA ezinyangeni ezingu-40.
Ngemuva kweminyaka emithathu nengxenye, abantu abadala abathatha i-lorcaserin babephindwe kathathu ngaphezu kokunganciphisi kwamaphesenti amahlanu kuya kweyishumi emzimbeni wabo kunabo abathola i-placebo, kusho omunye wabacwaningi abaholayo, uDkt. Erin Bohula.
Izivivinyo ezenziwa kwi-valve yenhliziyo azange zibonise ukungafani okuphawulekayo uma kuqhathaniswa ne-valves yenhliziyo kulabo abathatha indawo ye-placebo. Njengoba ukhumbule ukuthi lokhu bekulokhu okukhathazeka ngokuyinhloko uma kuziwa ekuphepheni kwamanye amaphilisi amancane, i-lorcaserin ingahle ibe yiphilisi engcono kakhulu yokulahlekelwa isisindo.
Abantu abadala abathatha imishanguzo babesengozini encane yohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2. Iphilisi libiza cishe u- £ 155-225 ($ 220-290) ngenyanga umthamo e-US. ILorcaserin inikeza enye indlela enhle kakhulu yezinqubo zokwehlisa isisindo njengokuhlinzwa kwebhande lesisu phakathi kwabanye.
Omunye umbiko we-BBC uveze ucwaningo olwenziwe ngabacwaningi e-University of Aberdeen eRowett Institute abenze ucwaningo ngokudla. Ososayensi bathi ucwaningo lwabo ngesifiso sokudla lubaholele engxenyeni ethile yobuchopho.
Baqaphela ukuthi ngokuthonya lawo maseli ngemithi bakwazi ukunciphisa ukudla. Njengoba i-lorcaserin isebenza ngale ndlela, imiphumela yalolu cwaningo ayivuli kuphela iminyango yemithi emisha efana ne-lorcaserin kodwa futhi yaqinisa lokho ochwepheshe abakukholelwayo mayelana ne-lorcaserin-ukuphepha nokusebenza kwayo.
I-Garcinia cambogia i-powder okukhipha